Banyere Anyị - Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd.
Energy storge usoro
RV / Marine / Golf ụgbọ ala / EV / AGV
Portable ike ọdụ
Energy nchekwa System
Low Speed ​​EV / Golf ụgbọ ala / Ihicha ụgbọ ala / RV
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. Bụ a elu-tech enterprise, ọkachamara R & D na ahịa nke Lithium rechargeable batrị ngwaahịa. Site na teknụzụ okike na njikwa sayensị, Lithtech eguzobela ndị otu injinia mbụ, ndị na-emepụta ihe, ndị R&D ndị ọhụụ, ndị njikwa ngwaahịa, mmesi obi ike na ahịa / ọrụ ndị ahịa. Kedu ndị na-etinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ire ere na batrị lithium dị elu,
Anyị na-enyekwa ọrụ zuru ezu nke ngwaahịa batrị ahaziri iche, gụnyere imewe batrị, mmepe, sel nhọrọ na BMS, chaja, Anyị na-enye ọtụtụ ngwungwu batrị yana ihe nkwụsị ahịa maka ndị ahịa .Ọ bụ ya mere ọtụtụ mmadụ ji mara Lithtech Energy n'ụlọ na ná mba ọzọ.
A na-eji ngwaahịa batrị Lithium anyị eme ihe na nkwado UPS 、 、lọ elu Telecom system Sistem nchekwa nchekwa ọkụ vehicles ugbo ala eletriki AGV olf Golf-cart 、 Street-Cleaner er electric-motorcycle cycle solar street light 、 na ngwaọrụ eletrik wdg.
Dị ka anyị niile mara, Lithium batrị bụ batrị batrị kachasị n'ọtụtụ ebe na kọmputa. ọ bụ ịdị arọ dị mfe, gburugburu ebe obibi, ndụ ogologo ndụ, yabụ Ọ ga-abụ ezigbo ngbanwe maka batrị acid, Lithtech na-enye ihe ịchọrọ.
Dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa nke mgbakọ batrị / batrị mkpọ Onye na-eweta ngwaahịa na China. Lithtech bụ nwata, gbasiri ike ma kee ihe, anyị ga-aga n’ihu ịzụlite ngwaahịa nwere echiche dị iche iche na teknụzụ ọhụụ n’ọdịniihu, Anyị kwenyere na anyị nwere ike iweta ụwa mma mma site na ịkwalite teknụzụ batrị Lithium na ngwa niile nke ndụ anyị.
Ndụ Ọhụrụ Ndụ Ọhụrụ Nnọọ na Lithtech!
Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe eji eme ọgbara ọhụrụ ma were ihe karịrị ndị ọrụ 100.
Naputa ngwa ahia ohuru na ahia ososo; bulie ntukwasi obi nke ogo ngwaahịa a.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwere ike ịnye asambodo ndekọ elektrọnik mana akwụkwọ izizi ga-edebe na ụlọ ọrụ.
anyị nwere ike ọkachamara na-emepụta na technicians inye oru aka.
Modulekwalite modul batrị
Inweta MW larịị ESS
Developzụlite 5G telecom ọdụ ndabere usoro
Ejiri dị ka Natinal Hight-tech Enterprise
Mma site National "peacock Plan" Talent cooper oru ngo
Enwere ihe karịrị 20.000 nkeji nke batrị lithium na HESS na ụgbọ ala ụgbọ ala dị ala
Partner na Pack factory, ọkachamara pack otu e guzobere
Wuru usoro nkwado na Nanning Vehicle Company Company, Dalian Rongke Power, SIASUN
Ejiri ntọala Lithtech, ebumnuche iji nye batrị lithium
Ekwentị: + 86-15013751033
Jụọ nkata ( 0)